Zimbabwe Yoramba Ichirasikirwa neMari Inodarika Bhiriyoni Imwe Chete reMadhora paGore neNyaya yeHuori paGoridhe
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti nyaya yehuori hwatekeshera mukucherwa nekutengeswa kwegoridhe iri kupa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda zvopa kuti kugadzirisa hupfumi kurambe kuchinetsa.
Vachitaura gore rapera apo vaishanyira makamba emapurisa muBulawayo, gurukota rinoona nezvekuchengetedza kwemukati menyika VaKazembe Kazembe vakati nyika inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni rimwe chete nemazana maviri emamiriyoni emadhora kana kuti US$1,2 billion pagore nekuda kwehuori mukutengeswa kwezvicherwa kunyanya goridhe.
Asi sangano rakazvimirira reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari inosvika bhiriyoni rimwe chete nemazana mashanu emamiriyoni emadhora kana kuti US$1,5 billion pagore nekutengeswa kwegoridhe zvisiri pamutemo.
VaKazembe vakavimbisa kuti vachatenga michina yekuona kuti hapana vanoburitsa goridhe munyika nemukoto zvikuru pamabhodha. Mashoko aya akatsinhirwawo nemutevedzeri wegurukota rezvemigodhi, VaPolite Kambamura, vaudza Studio 7 kuti hurumende ichasimbaradza mabhodha kuona kuti hapana vanobusitsa zvicherwa nemukoto.
Asi kusungwa kwemutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation, Muzvare Henrietta Rushwaya, negoridhe rinosvika makirogiramu matanhatu remari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvitatu kana kuti US$333, 000 panhandare yeR.G Mugabe International muHarare uye kusungwa kwaVaTashinga Nyasha Masimire panhandare yendege yeOliver Tambo International kuSouth Africa negoridhe remari inosvika mamiriyoni gumi nerimwe kana kuti R11 million kunoratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikomba.
Mukuru wesangano reCentre for Natural Resource and Governance, VaFarai Maguwu, vanoti hurumende haina kuzvipira kurwisa huori.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti zvinonetsa kugadzirisa zvinhu sezvo vari kuchera goridhe vachisanganisira vekuChina, vatungamiri vemauto, mapurisa nevakuru muhurumende.
Mauto nemapurisa ane chitsama ari kuurayiwa mukurwira kana kurwisana nevari kumigodhi yegoridhe.
Muna 2019, sangano reZimbabwe Peace Project rakatiwo vanhu zana nvashanu vakaurayiwa nevanochera goridhe vachizviti mashurugwi asi hapana vakawanda vakasungwa sezvo vakaponda vaitsigirwa nevakuru munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi VaKazembe vakazotumira mapurisa kuyedza kumisa kudeuka kweropa
Vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZanu-PF, VaGilbert Muponda, vati mapurisa an fanira kupihwa zvikwanisiro uye kudzidziswa basa rekuona kuti hapana vabuda munyika nezvicherwa zvisiri pamutemo.
Nhengo yeAnti-Corruption Trust of Southern Africa, VaAlois Chaumba, vanoti zviri kuitika zvinokatyamadza zvikuru vachiti nyaya yehuori ichatora nguva yakareba kuigadzirisa kana pasina kuzvipira kwevatungamiri.
Mukuru wesangano eYoung Miners Foundation, VaPayne Farai Kupfuwa, vati havo kunyangwe paine matambudziko, kuchera goridhe kwabatsira vechidiki vakawanda.
Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, inoti huwandu hwegoridhe rakaendeswa kukambani inobvumidzwa kutenga goridhe yeFidelity Printers and Refiners hwakadzikira gore rapera nezvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana kusvika pamatani gumi nemapfumbamwe chete sezvo vanochera goridhe vachiita zvekukorokoza vasina kuunza goridhe raitarisirwa.
Huwandu hwegoridhe riri kutengeswa zviri pamutemo huri kuramba huchiderera kubva muna 2018 apo pakatengeswa matani makumi matatu nematatu neanoraudzira.
Vakawanda vanochera goridhe ava vanoti kunonoka kubhadharwa mari neFidelity Printers and Rifenery kuri kupa kuti vatengese goridhe pamukoto.
Mukuzeyedza kuti vanotengesa goridhe vawane mari dzavo nenguva, RBZ yakazivisa kuti ichapatsanura Fidelity Printers and Refiners kuitira kuti vanochera goridhe vakwanise kuve nechekuita nekutengeswa kwaro nekutenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvekambani iyi.